चीन घुम्न चाहने नेपालीका लागि 24 सुझाव - China Radio International
चीन घुम्न चाहने नेपालीका लागि 24 सुझाव
(GMT+08:00) 2016-09-21 13:03:54
नेपालीहरूको आर्थिक हैसियत बढ्दै गएपछि उनीहरूको अन्तर्देशीय पर्यटन पनि बढ्दै गएको छ। कतिपय नेपालीहरु युरोप अमेरिका सपरिवार घुम्ने गरेका छन्। अव एक उदीयमान मुलुक र युरोपियनहरूको भाषामा भन्दा 'दोश्रो युरोप'को संज्ञा पाउन उद्दत चीन घुम्नका लागि पश्चिमा मात्रै नभएर नेपाली पर्यटकहरू पनि उत्तिकै लालायित देखिन्छन्।
विस्तारै खुल्लापनतर्फ लम्किरहेको चीनमा विश्वका मानिसहरुले भ्रमण गर्ने र पर्यटनलाई गरिबी निवारणको एउटा सूत्रका रुपमा अंगीकार गरेसङ्गै चीनले अहिले पाहुनाको स्वागतमा प्राथमिकता दिएको छ। चीनले आर्थिक खुलापनसँगै जनस्तरमा पनि खुलापन बढाउँदै लगेको छ। कुनै जमानामा कैयौं शास्ती भोग्दा पनि चीन टेक्न नपाइएको अवस्थालाई पार गरेर अहिले सहजै चीन यात्रा र अश्चर्यलाग्दो परिवर्तनको साक्षी बन्न सकिन्छ। सबैको उस्तै प्रतिक्रिया हुन्छ - जे सुनिएको थियो, त्यो भन्दा कैंयौं खुला र अश्चर्य नै रहेछ, चीन।
एक मायावी मुलुक भएकाले चीनमा घुम्न लायक ठाउँहरु अनेकन् छन्। अग्ला अग्ला हिमालहरु, डरलाग्दा मरुभूमिहरु, प्राचीन सँस्कृतिहरु, अभूतपूर्व सुन्दर फाँटहरु, जातिय साँस्कृतिक विविधताहरु, अधिकाधिक स्वादिष्ट खाद्य परिकारहरुले भरिएको मुलुक नै चीन हो। विशाल भौगोलिकता र जनसंख्याका साथ विकासमा रफ्तार मारिरहेको मुलुक भएकाले चीनप्रतिको विश्व अभिरुची र आकर्षण बढ्दो छ। चीनका 23 प्रान्तहरु आन्हुई, फुच्यान, कान्सु, क्वाङ्गतोङ्ग, कुइचौ, हाइनान, हपेइ, हैलोङ्च्याङ्ग, हनान, हुपेइ, हुनान, च्याङ्गसी, चिलिन, ल्याओनिङ्ग, छिङ्गहाई, वल्लो शान्सी, शान्तोङ्, पल्लो शान्सी, सछ्वान, युन्नान, चच्याङ्गका आआफ्नै विशेषता र भौगोलिकता छन्। त्यसका अलावा स्वायत्त क्षेत्रहरु क्वाङ्गसी, भित्री मंगोलिया, निङ्गस्या, तिब्बत र सिन्च्याङ्ग अनि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङ्गकङ्ग, मकाउ र थाइवान अनि चार नगरपालिका पैचिङ्ग, छोङ्गछिङ्ग, साँघाइ र थ्येनचिन गरी विशाल भूमिको अवलोकन गर्नका लागि कम्तीमा पनि चार महिना नै लाग्नसक्छ।
चीन भ्रमणमा आएका बेला चीनको राजधानी पैचिङ्गस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो पनि लगभग सबै विदेशी पाहुनाको गन्तव्य बन्ने गर्दछ। राजधानी पैचिङ्गमा नेपालीको संख्या अन्य व्यापारिक सहरको तुलनामा अत्यन्त न्यून भएकाले नेपाली पाहुनाहरु रेडियोमा आएर नेपालीभाषी चिनियाँ र केही नेपालीहरु भेटघाट गर्न पाउँदा मामाघर आएजस्तै ठान्छन्। मनको बह पोख्ने क्रममा उहाँहरु भन्नुहुन्छः – यस्तो रहेछ, त्यस्तो रहेछ, यो ल्याउन छुट्यो, यसो गर्नुपर्ने आदि आदि गुनासो पनि सुनाउने गर्नुहुन्छ। कतिपय मित्रहरू सामाजिक सञ्जालमा भेट भएको बेलामा चीन आउँदैछु के के कुरा साथमा ल्याउनुपर्ला भनेर परामर्श पनि गर्ने गर्दछन्। चीन विशाल मुलुक हुनुका साथै दक्षिण चीनको उष्णकटिवन्धीय क्षेत्रदेखि उत्तर चीनको आर्कटिक मौसमले यसको विविधतालाई आत्मसात गर्दछ। तपाइँले घुम्न लागेको स्थानको आधारमा मात्रै सामान्यतया सम्बन्धित सुझाव दिन सकिएला। अन्यथा पैचिङ्गमा आउनुभएमा आधुनिक चीनका निर्माता माओको शव हेर्नका अलावा हेर्नै पर्ने केही ठाउँहरु यस्ता पनि छन्-
- छाङ्गछङ्ग अर्थात् ग्रेटवाल,
- कुकुङ्ग अर्थात् निषिद्ध दरबार,
- थ्यानमन स्क्वायर अर्थात् विश्वकै सर्वाधिक ठूलो स्क्वायर क्षेत्र
- थ्यानथान अर्थात् टेम्पल अफ हेभन,
- यी ह युआन अर्थात् समर प्यालेस
- यिन ह कुङ्ग अर्थात् लामा टेम्पल
- हु थोङ्ग अर्थात् बेइजिङ्गमा संरक्षित प्राचीन गल्ली संरचना
- पेइहाइ पार्क अर्थात विन्टर प्यालेस
- बेइजिङ्ग क्यापिटल म्युजियम ।
चार वर्ष चीनको राजधानी रहँदाको मेरो अनुभव र अधिकांश भ्रमण राजधानी पैचिङ्ग लक्षित हुने भएकाले यहाँ आउनुहुने नेपाली मित्रहरुका लागि मेरो तर्फबाट केही सुझाव वा यहाँको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दछु।
1- अङ्ग्रेजी भाषा - चीनमा सन् 1980 पछि अङ्ग्रेजीले सर्वसाधारणको जीवनमा स्थान पाउन थालेको हो । नयाँ चीनको स्थापनासँगै र खुलापन लागू भएसँगै चिनियाँहरु अहिले अङ्ग्रेजी भाषा सिकिरहेका छन्। अहिलेको नवीन पुस्ता त पुरै अङ्ग्रेजी स्कूल खोजी खोजी भर्ना हुन्छ। तपाइँ यहाँ आउँदा निजामति कर्मचारी, भन्सार अधिकारीहरु, प्रहरी, होटलका कर्मचारीहरु प्रायःअङ्ग्रेजी नबोल्न सक्छन्। कैयौं होर्डिङ्गबोर्डहरु अङ्ग्रेजी र चिनियाँ दुवैमा हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन्। कतिपय उल्थाहरु हास्यास्पद र गलत अर्थ लाग्ने खालका पनि हुनसक्छन्।किनकि यन्त्रद्वारा गरिएको रुपान्तरले कहिलेकाहीं चिनियाँ शब्दको भावार्थ नदिन पनि सक्छ। सामान्य होटल वा पसलवालाहरुले अङ्ग्रेजी बोल्ने अपेक्षा नगर्दा नै हुन्छ तर अधिकांश युवा पुस्ताले अङ्ग्रेजी बुझ्न सक्छन् अलिक विस्तारै बोल्ने प्रयास गर्नुभयो भने।
धेरैले विदेशीहरुले गर्ने गुनासो प्रायः एउटै हुन्छ कि चिनियाँ गाइडले पनि उनीहरुको अंग्रेजी भाषा बुझ्दिएनन्। नेपाली साथीहरुले पनि त्यस्तै अंग्रेजी बुझ्दिएन भनेर चित्त दुखाउँछन्। वास्तवमा हाम्रो अंग्रेजीलाई चीनमा दक्षिण एशियाली अंग्रेजी भनेर गिज्याइन्छ, त्यति मात्रै नभएर नेपालीहरूको अंग्रेजी न त अरबी, न भारतीय, न अफ्रिकी सङ्ग मिल्दो छ, यो त विछट्टै नेपाली मौलिक नै छ जुन हामी नेपाली नेपालीबीचमा बोल्दा त बुझिन्छ तर तेश्रो पक्षलाई गाह्रै पर्छ। चीनमा अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन भएपनि विविधतायुक्त अभ्यास नभएकाले चिनियाँहरुको अङ्ग्रेजी त्यति छरितो पनि छैन। त्यसैले चिनियाँले बुझिदिएन भनेर झर्को नमान्नुहोस्, ध्वन्यात्मक शब्दकोष छ भने कसरी सही उच्चारण गरिँदो रहेछ भने सुनेर बुझाउने प्रयास गर्नु राम्रो।
अहिले प्रविधिले मानव जीवनलाई सरल तुल्याएको परिप्रेक्ष्यमा तपाइँले आफ्ना मोबाइलमा अनुवाद गर्ने एप्सहरु राख्नसक्नु हुनेछ। आफूले भन्न चाहेको कुरा अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभयो भने चिनियाँमा अनुवाद हुने भएकाले त्यस्ता एप्सले तपाइँलाई झन्झटिलो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सक्छन्।
2- चिनियाँ खाद्य परिकार- चिनियाँ खानामा विविधता छ। अधिकांश नेपालीको मनमा चिनियाँ खाना भनेको चाउमिन अर्थात् छाउ मियान नै हो। दुनियाँमा कहि नखाइने मासुका परिकारदेखि काँचा पाका सबै खाले खाद्य परिकार यहाँ भेट्न सकिन्छ। त्यसका अलावा धेरै परिकार पाउन सकिन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। सबै होटलमा फोटो सहितको मेनु प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। तपाइँ चिनियाँ बोल्न जान्नुहुन्न भने औंलाले देखाएर मगाउन पनि सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ एक्लै हुनुहुन्छ भने मर्जी अनुसार खान सक्नुभयो तर चिनियाँसँग हुनुहुन्छ भने तपाइँले केही सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सामूहिक भोजन गर्दा एउटा गोलो टेबुलमा अतिथिलाई राखेर एउटै भाँडाबाट खानेकुरा टिप्दै खाने चलन हुन्छ। अर्काको जुठो नखाने नेपाली बानीलाई यसले केही हच्काउन पनि सक्छ।
नून नहालेको खानेकुरा खानु नेपालीका लागि पक्कै पनि गाह्रो कुरा हो। नेपालीहरू खानेकुरामा मसालेदार, चर्को वा पिरोपना समाविष्ट हुन्छ। अझ भात चाहिं नभई नहुने परिकार भन्दा पनि हुन्छ। छिमेकी मुलुक भैकन पनि नेपाली खानपानसँग चिनियाँहरूको खानपान मिल्दै मिल्दैन। कम नुन हालिएको, कतिपयमा त नून नै नहालिएको खानेकुरा पनि हुन्छ। भातलाई पुनः पकाउँदै झोलिलो हाँसे जाउलो बनाएर कचौरामा दिइने खोलेमा नून नहाल्ने हो भने हाम्रोतिर गाईवस्तुले पनि खान रुचाउँदैन भने चिनियाँहरु कस्तो मीठो भन्दै खाएको देख्दा अचम्म पनि लाग्छ। किनकि अधिक नूनको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने कुरालाई चीनमा व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।
कतिपय नेपालीले चिनियाँ खाना राम्रोसङ्ग नपाकेको भनेर आलोचना गर्दछन्। खानेकुराहरु अझ सागसब्जीलाई धेरै गल्ने गरी पकाउँदा भिटामिन तत्व नष्ट हुन्छ भन्ने हामीले पढेपनि बेस्सरी पकाउनुको विकल्प छैन। किनकि खानेकुरामा अनेकन अखाद्य वस्तुको मिसावट र खानेकुराको अस्वस्थताका कारण पनि स्वास्थ्यगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बेस्सरी पकाएर मात्रै खानु नेपालीहरुका लागि बाध्यताको कुरा हो। यहाँ भने नपाकेका वा काँचो कचिलो, उसिनेको, खानेकुराहरुको बाहुल्यता हुन्छ। त्यो ग्याँस इन्धनको अभावले नभएर पोषण तत्वलाई भरपूर प्रयोग गर्ने चिनियाँ खाद्य सँस्कृतिको शैली हो।
चीनमा खानेकुरा खाँदा चपस्टिकको प्रयोगलाई रोचक मानिन्छ विदेशीका आँखामा। कतिपय विदेशीहरु कैयौं पटक प्रयोग गर्दा पनि दुई छेस्काबीचमा खाना अड्याएर मुखसम्म लैजान सक्दैनन्। कतिपय भने रोचक मानी मानी चपस्टिकले खाना खाएको अनुभव सँगाल्न खोजिरहेका भेटिन्छन्। यदि तपाइँ चपस्टिकले खान गाह्रो लागेमा चम्चा काँटाले खाँदा हुन्छ तर तपाइँलाई खानेकुरा पस्किँदा चम्चा दिइन्न, चपस्टिक दिइन्छ। मगाएमा प्राप्त हुन्छ नै तर प्रयोगको रहरले चपस्टिक प्रयोग गर्दा खाना यत्रतत्र उछिट्टिएला भनेर पनि होशियार हुनुपर्छ।
साकाहारी भोजनकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाइँका लागि चीनको यात्रा कष्टकर हुनसक्छ। अधिकांशले बुझेको कुरा हो कि चीनमा हरेक प्रकारको मासुलाई विना आनाकानी उपभोग गरिन्छ। मासुलाई त राष्ट्रिय खाना नै भन्दा फरक पर्दैन किनकि कुनै पनि परिकारमा मासु समेटिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मासु मिसिएका खानेकुरासँग लसपस भएका खाना खानुपर्ने बाध्यता साकाहारीलाई हुन्छ। या त पहिल्यै छुट्टै अर्डर गर्नुपर्छ या त अरूले छोइदेला भन्ने डरले आफ्नो प्लेटमा पहिल्यै सुरक्षित गर्नुपर्छ नत्र अरुले चपस्टिक वा चम्चाले छोएपछि खाँदा साकाहारी मन बिटुलिन सक्छ।
साकाहारी भोजनका लागि यो मुलुक सजिलो पक्कै हैन। यहाँका होटल व्यवसायीहरु पनि गैर मांसाहारीप्रति खासै सचेत देखिँदैनन्। यदि तपाइँ मांसाहारीसँग सम्झौता नगरि छोड्नुहुन्न भने मेरा केही अनुभव र सुझावलाई मनन गर्नुभएमा लाभदायक होला।
क- पूर्व जानकारी- आफू साकाहारी भएको कुरा पहिल्यै बताउनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा बुझिएन भने तपाइँले चिनियाँमा पनि भन्नु सिक्नुहोस् कि तपाइँ पूर्णतया साकाहारी हुनुहुन्छ र तपाइँ कुनै पनि हालतमा मासु खान सक्नुहुन्न। किनकि मासुसँग धेरै कुरा जोडिन्छन् तपाइँ मासु पो खानुहुन्न त मासुको सुप, हड्डी, रगत, धुलो या माछा वा कीराफट्याङ्ग्रा त खानुहुन्छ नि। किनकि तिनीहरुलाई मासु नामले उच्चारण गरिँदैन नि।
एकपटक म कतै घुम्न गएको बेलामा खानेकुराको पवित्रताका लागि मुस्लिम होटेलमा छिरें। तर यहाँ दिइएको सुपमा साना साना मासुका टुक्रा भेटिए। सिआन सहर घुम्न गएको मेलामा मैले साकाहारी नूडल्स माग्दा साहुजीले भने कि अलिअलि मात्रै मासु छ। मैले झर्किएर खान्न भनें, उनले फिर्ता लिएर गए अनि मासु मासु मिल्काएर फेरि ल्याइदिए। मैले अझै शंका लागेर नियाल्दा मासुको अवशेष देखें र फेरि इन्कार गरें। अर्को ल्याइदिए तर सुप मात्रै मासुको बताए। यसरी हैरान भएपछि मैले खाने निर्णय नै रद्ध गरें। एकपटक आफ्नो रेडियोका चिनियाँ सहकर्मीहरुसँग पैचिङ्गबाहिर बिजनेस ट्रिपमा गएका बेला घुम्ने टेबुलमा सबैले चपस्टिक चोप्दै लिइरहेका बेला एउटाले भने – साग साग मात्रै लिउ न। त्यसकारण पूर्णतया पूर्व भनेमा मात्रै तपाइँ जोगिने संभावना हुन्छ।
ख- प्रविधिको सहयोग- अनलाईनका माध्यमबाट तपाइँले पूर्णतया साकाहारी रेष्टुरेन्ट पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। HappyCow.com ले तपाइँलाई बेइजिङ्ग र सांघाइमा भएको बेलामा शुद्ध साकाहारी होटल फेला पार्न वा साकाहारी मैत्री खाद्यशाला खोज्नका लागि सघाउनेछन्।
ग- सडक खाना- चिनियाँ खानेकुराहरु नेपालीका तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ हुनेमा दुईमत छैन। सडक खानाहरु पनि हाम्रोमा जस्तो लापर्वाही त गरिएको हुँदैन तर त्यहाँ तारिएका खानाहरु जनावरको बोसोद्वारा तारिएका पनि हुनसक्छन्। कतिपय सस पनि मासुजन्य हुने भएकाले मुखबाट र्‍याल चुहाउनुअघि नै इमान्दार साहाकारीले आफ्नो आत्मालाई नढाँट्नका लागि इमान्दारीपूर्वक खोजिनीति गर्नुपर्दछ।
घ- परम्पराको अनुयायी – साकाहारी भोजनका सम्बन्धमा चीनको पुरानो इतिहास रहेकाले अहिले पनि बौद्ध वा ताओ धर्मावलम्वी भान्सेहरुबाट शुद्ध साकाहारी भोजन गर्न सकिनेछ। तपाइँले आफ्नो खानेकुरा छनौट गर्दा सागपात, च्याउ, तोफूलाई रोज्नुभएमा संभावित मासु मिसिने खतरालाई टार्न सक्नुहुन्छ।
ङ- भात – चिनियाँहरुको भोजनमा भात हुन्छ तर हुनैपर्छ भन्ने हैन। थुप्रै प्रकारका सागसब्जी मासुका परिकार खाँदा खाँदै खाने कार्यक्रम सम्पन्न हुनसक्छ। भात आउला कि भन्ने सोच्दा सोच्दा खानेकुराका अरु परिकारले नै पेट भरिने अवस्था आउन सक्छ। तपाइँले स्पष्ट रुपमा भात अर्डर गर्नुभयो भने मात्रै तपाइँको टेबुलसम्म आइपुग्न सक्छ। कम्तीमा भातमा मासु नहालिने भएकाले यो साकाहारीका लागि पेट भर्ने राम्रो तरीका हो।
च- पानी – चीनमा जताततै पाइने पेय पदार्थ हो। पानीको मुहान कहाँ भन्ने कुरा शायदै मानिसलाई थाहा छ तर घर घरमा पानी भने चौबीसै घण्टा जति चाहे पनि आइरहेको हुन्छ। तर त्यो पानी सिधै पिउन वा कतिपयका विचारमा तताएर पिउन पनि उपयुक्त छैन। त्यसैले मानिसहरुले जार वा बोतलको पानीलाई पिउनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तपाइँले पनि होटल धाराको पानी देखेर पिइहाल्ने गल्ती नगर्दा हुन्छ।
छ- खानाको पैसा तिर्ने- चीन पुरानो सँस्कृति भएको अरुभन्दा फरक विकासोन्मुख मुलुक हो भन्ने थाहा नपाएकाहरु बाहेक नेपालीका लागि चीन धेरै टाढाको दूरी हैन। जसरी पश्चिमाहरु एउटा रेष्टुरेन्टमा सँगै जान्छन् अनि खानाको बिल आधा आधा गरेर तिर्छन् तर चिनियाँहरु पनि नेपाली जस्तै छन्। उनीहरु पनि जसले आमन्त्रण गर्‍यो वा जसले पैसा ‌तिर्न पहिला अग्रसरता देखायो उसैले तिर्ने चलन छ। उनीहरु पनि पश्चिमाहरुले सँगै खाएर पनि आ-आफ्नो तरीकाले बिल तिरेको देख्दा अचम्म मान्छन्। केही चिनियाँहरुले नेपालीहरु पनि त्यस्तै हो कि भनेर जिज्ञासा राख्दछन्। सँगै जाने तर छुट्टै पैसा तिर्नाले खासै मानिसबीचमा हार्दिकता छैन कि जस्तो देखिन्छ नि। आफूले पैसा तिर्न नपाएपछि हामी पनि भन्ने गर्दछौं-अर्को पटक मैले खुवाउँछु है वा अर्को पटक पैसा मैले तिर्न पाउनुपर्छ।
3- सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट- चीनमा जताततै इन्टरनेटको सुविधा भेट्न सकिन्छ। त्यसका अलावा पर्यटकीय क्षेत्रमा त सहजै। पासवर्ड पाउनका लागि तपाइँले आफ्नो मोबाइल वा पासपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यहाँ आएपछि धेरै नेपाली मात्रै नभएर सबैजसो विदेशीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दछन्। चीनका कतिपय क्षेत्रमा सहज रुपमा फेसबुक, ट्वीटर, गुगल, आदि बाह्य मुलुकका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बन्देज छ। यहाँ चल्ने भनेको वीच्याट हो। यहाँ अइपुगेपछि अधिंकाश नेपालीहरूले बल्ल महसुस गर्दछन् कि नेपालस्थित आफन्त र चीनमा भएका साथीभाइसँग सम्पर्क गर्न पाइएन। त्यसैले केही दिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुनियाबाट विश्राम लिन पनि यो बन्देजले काम गर्ला। यदि सामाजिक सञ्जाल नचलाई भएको छैन भने निःशूल्क वा पैसा तिरेर केही प्रोक्सी तपाइँको ल्यापटप वा मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
चीनमा आएको बखत् केही नेपाली साथीहरुले आफ्ना अनलाईनमा भएका कुरा खोलेर देखाउने प्रयत्न गर्दछन्। आफ्नो भ्रमण वा आफूले चीन भ्रमण गर्दाका बारेमा लेखिएका सामग्री देखाउन खोज्दा साइटहरु नखुलेर निराश पारिदिन्छन्। चीनमा अश्लील कुरा फैलाइएको, राष्ट्रिय हित विरुद्ध अनलाईन प्रयोग गरेको तथा समाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रयास गरेको भन्दै निगरानी निकायले कैयौं साइटहरु बन्द गरेका समाचारहरु आइरहेका हुन्छन्। तपाइँका सामग्री अनलाईनमा छन् भने एकपटक चीन आउनुअघि निश्चित साइट खुल्छ कि खुल्दैन भनेर कसैलाई सोधिराख्नुभएमा उपयुक्त होला। विश्लेषकका अनुसार सुरक्षा चेतावनी र संरक्षणवादका कारण चीनमा फेसबुक लगायत केही सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएका छन्।
4- सार्वजनिक शौचालय – चीनका सहरहरु तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा शौचालयको राम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँ पानी र सरसफाईको पनि यथेष्ट व्यवस्था हुन्छ। काठमाडौं सहरका सार्वजनिक शौचालय देखेका वा प्रयोग गरेका हरेक नेपालीलाई सार्वजनिक शौचालय भन्ने वित्तिकै वान्ता आउने हुनसक्छ। तर यहाँका शौचालयको वातावरण देखेर दङ्ग पर्नुहुनेछ। तथापि पश्चिमा पर्यटकहरुले भने चिनियाँ सार्वजनिक शौचालयका कमजोरीलाई लिएर खुबै धज्जी उडाएको देखिन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा कसैले चीनको आलोचना गर्नुपर्‍यो भने शौचालयमा टिस्यू पेपर नभएको विषयलाई निकै चर्को रुपमा पस्केर व्यङ्ग्य हानेको देखिन्छ। यदि तपाइँ टिस्यू पेपरको प्रयोगकर्ता भएमा आफैंले लिएर जानु राम्रो हुन्छ।
5- बिल भौचर लिने– यो एउटा राम्रो बानी हो कि जहाँबाट सामान किनिन्छ वा सुविधा लिइन्छ अनिवार्य रुपमा बिल लिने बानीले कतिपय अवस्थामा तपाइँलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। कहीं कतै ठगिएको खण्डमा उजुरी गर्न पनि सहज हुनेछ। कुनै ठाउँमा खाना खाइसकेपछि त्यहाँको बिल लिनुभयो केही सामान छुटेमा वा कुनै अत्यावश्यक केही सेवा चाहिएमा त्यो विलमा भएको ठेगानाले सघाउ पुर्‍याउनेछ। त्यतिमात्रै नभएर कुनै होटल वा भेटिएका मानिसको नेमकार्ड लिइराख्ने बानीले तपाइँलाई समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि सघाउन वा भेट्न सजिलो हुनसक्नेछ।
6- पर्यटकीय स्थानको पूर्वज्ञान – भ्रमणको उद्देश्य प्रत्यक्ष आँखाले हेर्नु र ज्ञानको दायरालाई फराकिलो पार्नु पनि हो। कुनै पनि देशका सम्पदा घुम्नुअघि अग्रिम जानकारी लिइराखेमा सम्बन्धित स्थलमा गएर प्रमाणित गर्न सघाउ पुग्नेछ। नत्र तत्क्षणमा भनेजति ज्ञान लिन सहज नहुनसक्छ। त्यसो त पढेको भन्दा देखेको शिक्षा दीर्घजीवि हुन्छ नै। तथापि कतिपय आफूले घुम्ने स्थानको बारेमा इन्टरनेट वा केही माध्यमबाट परिचय लिइराख्दा अझ स्पष्ट हुन्छ। केवल चिनियाँ अङ्ग्रेजी बोल्ने पर्यटकको भर पर्दा केही कुराहरु छुट्न सक्छन्। आफू जानुपर्ने पर्यटकीय थलोका बारेमा आफैं जानकार हुँदा तपाइँ स्मार्ट पनि ठहरिनुहुनेछ।
7- व्यस्त भ्रमण सिजन छल्नु श्रेयस्कर - चिनियाँ नयाँ वर्ष (जनवरी वा फेब्रुअरी), मजदुर दिवस (मे महिनाका पहिला दुई साता), राष्ट्रिय दिवस (अक्टोबरका मध्य दुई साता), मध्य शरद सेप्टेम्बरको पहिलो साता- यी दिनहरुमा चिनियाँहरु आफैं विदा मनाउन ठेलमठेल गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा चीन घुम्न आउनु ट्राफिक जाम, मानवसागर, यातायात असुविधा आदि कारणले झन् दिक्कलाग्दो पनि हुनसक्छ। त्यति मात्रै नभएर यातायात पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। धेरै विदेशीहरु वसन्त चाड अर्थात् चिनियाँ नयाँ वर्षको अवधिमा चीनमा रमाउन चाहन्छन्। यदि तपाइँ चिनियाँ परिवारसँग बस्नुहुँदैछ वा चिनियाँ परिवारद्वारा आमन्त्रण गरिँदै हुनुहुन्छ भने केही कुराहरु याद राख्नुहोस् जस्तो कि सकेसम्म यो विदामा घुम्ने योजना नबनाउनुहोस्, बनाउनु नै हुन्छ भने टिकट अग्रिम बुकिङ्ग गर्नुहोस्। चिनियाँ परिवारमा घुम्दाखेरी केही उपहार लैजानुहोस्। होङ् पाउ अर्थात् रातो खामको संस्कृतिबारे जानकारी लिइराख्नुहोस्।
8- चिनियाँ होटेल सुरक्षित - चिनियाँ एक तारेदेखि छ तारेसम्मका होटेलहरु सुरक्षित, स्वच्छ र सस्तो रुपमा पनि पाउन सकिन्छ। चीनमा भएका अधिकांश होटलहरुबारेको विवरण इन्टरनेटमा पूरा विवरणसहित राखिएको हुन्छ। त्यसका अलावा विमानस्थलबाट होटलसम्म पुग्ने रेल, बस, आदिकोबारेमा पनि खुलाइएको हुन्छ। व्यस्त सिजनमा चीन भ्रमणमा निस्कनु अगावै बुक गर्नुभएमा सजिलो हुनेछ। चीनका होटलमा आधारभूत कुराहरु हुने भएकाले हल्का रुपमा यात्रा गर्दा हुन्छ। जस्तो कि अधिकांश होटलमा टुथपेष्ट र ब्रस, नुहाउने साबुन, स्याम्पू, कतै कतै दारी काट्ने फोम र मेशिन, चप्पल, शयन बस्त्र, कण्डम, सलाई चुरोट, ग्रीन टी आदि उपलब्ध हुने भएकाले यस्ता झिटीझ्याम्टा बोकिराख्नु जरुरी छैन। कतिपयको सुझावमा युवा होस्टेलमा बस्नु सस्तो हुनेछ। त्यसो त चिनियाँ होटेलहरु त्यति झमेलिया पनि छैनन्।
9- शिष्टाचारका शब्दहरु - कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्नुको अर्थ मानिस मूर्तिवत् उभिनु पक्कै पनि हैन। त्यहाँ पुगेर गतिशील मानिससँग परिचय हुनु, अन्तरदेशीय सँस्कृतिबारे जानकारी साटासाट गर्नु, फरक देशमा मानिसको लवाईखवाई, रीतिस्थिति, बानीव्यहोरा आदिबारे जानकारी लिनु पनि पर्यटनको एक पाटो हो। त्यसैले मानिससँग भेटिएपछि उनीहरुसँग अभिवादन साटासाट गर्नु सामान्य शिष्टाचार नै हो। एकपटक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वार्षिकोत्सव समारोहमा आमन्त्रित विभिन्न देशका पत्रकारहरुमध्ये एकजना सिसिटिभी अङ्ग्रेजीमा काम गर्ने विदेशीसँग परिचय हुनेवित्तिकै उनले नमस्कार भनेर अभिवादन गरे। एकपटक नेपाल गएका उनको अभिवादनले हामीबीचमा आत्मीयता बढ्यो। तपाइँ कुनै देशमा जानुहुन्छ भने न्यूनतम त्यस देशका अभिभावद र सामान्य आदर अदवका शब्द प्रकट गर्नसक्नुभयो भने आपसी वातावरण थप न्यानो बन्न सघाउँछ। केही शब्दहरु सिक्नुहोस्
Ni Hao (नि हाउ-नमस्कार）
Ni hao ma? (नि हाउ मा- तपाइँलाई सञ्चै छ कि)
Renshi ni hen gao xing (रेन् श् नि हन् काउ सिङ्ग-तपाइँलाई चिनेर निकै खुशी लाग्यो)
Ting bu dong (थिङ्ग पु तोङ्ग-बुझिन)
Dui bu qi (तुइ पु छि-माफ गर्नुहोला)
Xie xie (से से- धन्यवाद)
Qing wen (छिङ्ग वन- कृपया के म सोध्न सक्छु)
Mai dan (माइ तान - कृपया बिल पाउँ)
shuo ying wen (शुओ यिङ्वन-अङ्ग्रेजी बोल्नुहोस्)
Bu hao yi si (पु हाउ यि स्- माफ गर्नुहोस्, असजिलो लाग्यो)
Ni bo er (नि पो अर-नेपाल)
Ni bo er ren(नि पो अर रन् - नेपाली)
Zai jian (चाइ च्येन – फेरि भेटौंला) आदि आदि।
10- सर्वसुलभ यातायात- यात्रा गर्दा सार्वजनिक यातायात सुविधाजनक हुन्छ र चीनको यातायात सुरक्षित पनि ठानिन्छ। रेल, बस वा डुङ्गाको प्रयोग गर्दा आर्थिक रुपमा सस्तो र सडकका दृश्यहरु पनि देख्न पाइन्छ। चीनमा यदि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकदमै सहज हुन्छ। तर अफूले जान चाहेको ठाउँको नाम चिनियाँ उच्चारण र अंग्रेजी उच्चारण जानिराख्नुभयो भने गन्तव्यमा पुग्न सहज हुनेछ। उदाहरणको लागि (Babaoshan)बाबाओशान। यसको उच्चारण पापओशान हो। गलत उच्चारणले उपयुक्त ठाउँमा पुग्न असहज हुन सक्छ। चिनियाँ बस र सबवेमा प्रत्येक स्टपमा पुगिएको ठाउँ, सवारी साधन कता गैरहेको छ? यसपछि कुन स्थान आउँदैछ भन्ने कुरा डिजिटल रूपमा स्क्रोल भैरहेको हुन्छ भने ध्वनिमा अनाउन्समेन्ट पनि भैरहेको हुन्छ।
11- निषेधित सामग्री थाहा पाइराखौं – कुनै पनि देश घुम्न जानुअघि त्यहाँ लैजान मिल्ने र नमिल्ने कुराहरु पनि विचार गर्नुपर्छ। केहीसमय अघि चीनमा नेपाली खुकुरीहरु उपहारका रुपमा ल्याउन सकिन्थ्यो तर अहिले त्यसमा प्रतिवन्ध छ। नेपालमा कानुन खुकुलो भएकाले सानातिना लागूऔषधलाई वास्ता गरिन्न तर सुरक्षाका दृष्टिले चीनमा एकदमै कडाइ गरिएको हुन्छ त्यसैले जानाजान यस्ता कुराहरु लिएर चीन छिर्नबाट होसियार रहनुपर्छ। चीनमा सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा हुन्छ। यसको अर्थ तपाइँको नियतमा कुनै खराबी छैन भने तपाइँलाई मध्यरातमा घुमफिर गर्न, सडकमा अरुलाई नबिच्काइकन रमाइलो गर्ने स्वतन्त्रता छ। तपाइँ कुनै गलत क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरक्षाको आँखाबाट लुक्न सक्नुहुन्न किनकि यहाँ जताततै सिसिक्यामराद्वारा निगरानी भैरहेको हुन्छ। त्यतिमात्रै नभएर पश्चिमा पर्यटकहरुले पनि एकल वा पारिवारिक रुपमा चीनमा यात्रा गर्नु सुरक्षित हुने ठहर गर्छन्।
12- सहयोग आदान प्रदान – सामान्यतया जुन देशमा पनि सहयोगका लागि भरपर्दो निकाय भने सुरक्षाकर्मी नै हुन्। तर पहिलो प्राथमिकतामा सुरक्षाकर्मीलाई राख्दाराख्दै पनि अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा अलिक विचार पुर्‍याउनुपर्छ। केही मानिसका विचारमा चिनियाँहरु अलिक अन्तर्मुखी तर विदेशीलाई सघाउन इच्छुक देखिन्छन्। आम मानिसले दिने सहयोग खराब नियतले नभएपनि व्यक्त गर्ने शैलीमा हुनसक्ने कमजोरीले थप दुःख उठाउन नपरोस्। त्यसो त चिनियाँहरु मैत्रीपूर्ण भावनाका हुन्छन् त्यसबीचमा कोही कोही नराम्रा मान्छे त भै हाल्छन् नै। त्यसमाथि जव तपाइँ सडकमा हिँडिरहेको हुनुहुन्छ चिनियाँहरुले तपाइँमाथि नियालेर हेर्दा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। उनीहरु जानेको र सकेको सहयोग दिन पनि उत्साहित हुन्छन् उनीहरुबाट सहयोग लिने दिने मौका मिल्यो भने चीनको सम्झना पनि बन्नेछ।
चीनमा बसेको लामो समय भैसक्दा पनि मलाइ अझै कुन दिशातर्फ गैरहेको छु भन्ने हेक्का हुँदैन। त्यसैले मानिसहरूले इशारा गर्दा सोझ्याइएका हातको भर पर्दा उल्टो गतिमा हिड्न सकिन्छ। एकजनालाई सोधिसकेपछि अल्लि पर पुगेर अर्कोलाइ सोधेर निश्चित गर्नुपर्ने एक नेपाली मित्रको सल्लाह छ।
भाषा सहयोगीका रुपमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी छनौट गर्नु सहज हुनेछ। किनकि विद्यार्थीहरु माण्डारिन र अङ्ग्रेजीमा अचेल पोख्त हुँदै गएका छन्। उनीहरु विदेशीसँग भाषिक परीक्षण वा अभ्यासका लागि विदेशीलाई सघाउन उत्साहित हुन्छन्।
चिनियाँहरू अफ्नो जिम्मेवारी कुनै पनि हालतमा पूरा गर्छन्। उनीहरूले जिम्मा लिएको पाहुना बाहेक अरूतिर उनीहरू ध्यान लगाउँदैनन्। कतिपय अवस्थामा लाग्नसक्छ, संगै हिड्दा डुल्दा पनि नजीकै हिँडिरहेको चिनियाँ गाइडले कस्तो चासो नदिएको होला? त्यसकारण यदि कोही तपाइँसँग हेलिन्छ भने रम्नुहोस अन्यथा असम्बन्धित मानिसले हेरेन वा जिम्मेवारी इतर तपाइँमाथि मन लगाएन भनेर गुञ्जायस गर्नु व्यर्थ छ।
13- घुम्नै पर्ने केही स्थानहरु - कुनै एउटा स्थल मात्रै घुम्नुहुन्छ भने त्यो राजधानी पैचिङ्ग नै हुनेछ। अन्यथा चीनमा अनेकानेक विश्वसम्पदास्थलहरु र घुम्न लायकका क्षेत्रहरु छन्। हार्बिनमा घुम्नुभएमा हिउँको विश्व देख्नुहुनेछ र आइस मूर्तिकला महोत्सवको मजा लिन सक्नुहुनेछ। सान्यामा जानुभएमा गल्फ खेल्न र समुद्रको सुन्दरता भोग्नुहुनेछ। हिमालय तथा बौद्ध सम्पदाको अवलोकन गर्नका लागि ल्हासाले तपाइँलाई स्वागत गर्नेछ। किनमेलका लागि हङ्गकङ्ग र चीनभन्दा फरक लाग्ने चिनियाँ कुनै भूभाग देख्नका लागि सिन्ज्याङ्ग उपयुक्त गन्तव्य हुनेछ र भित्री मंगोलिया पनि सही छनौट हुनेछ।
सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा विविधतायुक्त भैकन पनि चीन घुमेर नअघाइने देश हो। पथ प्रदर्शक विना नै कतिपय पश्चिमाले ट्याक्सी ड्राइभरको भरमा पनि विभिन्न ठाउँहरु घुमेको सुनाउँछन्। ड्राइभरसँगै बसेर होटलमा खाना खिलाउनु र उनीहरुको ट्याक्सी भाडा तिर्नुबाहेक सुमधुर सम्बन्ध राखेर उपयुक्त स्थलको भ्रमण गर्ने चलाखी पनि केहीले अपनाउने गरेका छन्।
14- भावनाको ख्याल गर्ने बानी - हरेक मानिसमा आअफ्नै विशेषता हुन्छन्। नेपाली युवा वा अधवैंसे पुरूषहरूले चिनियाँ युवतीका शारीरिक बनावटमा टिप्पणी सुनिन्छ। जातीयता वा शारीरिक कमजोरीमा व्यङ्ग्य गर्नु वा अर्काको स्वाभिमान डग्ने तरीकाले बोल्नु कसैका लागि राम्रो हैन त्यसैले एक मानिसले अरुका प्रति उत्तिकै श्रद्धाको भावना राख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ।
जसरी नेपालीहरू गरीब भएपनि मनका धनी हुन्छन्। उनीहरूको घर खरले छाएको भएपनि बाहिर ठाँटिएर हिँड्ने बानी हुन्छ। यही बाह्य शानशौकत हेरेर अपरिचित मानिसले हामीलाई सम्मानले हेर्दा हुन्। आफूले पाएको आदर सम्मानलाई अधिक तडक भडक स्वरूपमा प्रस्तुत गर्नु जायज हैन। यसबाट देशको प्रतिष्ठामा पनि नकारात्मक असर पर्न जाला भनेर हेक्का राख्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुँदै हो। एकाध मानिसले गरेको नराम्रो व्यवहार राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने कारक बन्न सक्छ।
15- समय तालिका - हाम्रोमा कुनै पनि कामहरू समयमा नगर्ने वा नहुने चलन छ। यसलाई हामीहरू 'नेपाली समय' भनेर व्यंग्य पनि ठोक्छौं। चिनियाँहरू आफूले गरेको काम वा कार्यतालिकामा निष्ठावान् हुन्छन्। एकपटक एकजना साथीले नमीठो भोगाइ सुनाउनुभयो। बाहिर निस्किने बेलामा उहाँले टाइ लगाउन विर्सनुभएछ र अन्तिम मिनेटमा होटलबाट निस्किन ठिक्क परेको गाडीतिर हेर्दै एकछिन है भन्दै टाइ लिन भित्र दौडनुभएछ तर फर्किँदा त गाडी गैसकेको रहेछ। समय अनुसार चल्ने नचल्ने स्वतन्त्रता आफ्नो नीजि भ्रमणमा हुनसक्छ तर सामुहिक वा कुनै सँस्थाद्वारा आमन्त्रण गरिएको भ्रमणमा यस्तो लापर्वाही गरेर अरुको असुविधाको कारक बनिदिनुहुँदैन। अनि घुम्ने क्रममा पहिरन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। विकासमा रूपान्तरण हुँदै गरेको चीनमा नागरिकहरू पनि देशैपिच्छे मानिसका लवाइ खवाइलाई पनि ख्याल गरिरहेका हुन्छन्।
16- कान् पेई अर्थात् मदिरापान सँस्कृति – चिनियाँ संस्कृतिमा पिउनुको सुन्दर पाटो छ। अझ भन्ने हो भने चिनियाँ पिउने कला र अन्य मुलुकको अलिक फरक पनि छ। सँस्कार वा शिष्टाचारका लागि आयोजित ककटेल पार्टीहरूमा अधिक पिएर होहल्ला गरेको सुनिन्छ। हातगोडै छाड्ने गरी पिउने र आफूलाई बहादुर रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो परिपाटी आफ्नै मुलुकमा वा आफ्नै साथीभाइको बीचमा त नगर्दा राम्रो हो भने शिष्टाचारका लागि आयोजित यस्ता कार्यक्रममा नियन्त्रण राख्नुहोस्। त्यति मात्रै हैन, चीन विश्वका सर्वाधिक धुम्रपानका उपभोक्ता देशमध्ये पर्दछ। उनीहरुले कानुनले निषेध गरेको बाहेक ठाउँमा रहेर धुम्रपान गर्न हिच्किचाउँदैनन्। त्यति मात्रै नभएर चिनियाँहरु तपाइँसँग भेट भएमा चुरोटको खिल्ली टक्र्याएर पनि स्वागत गर्दछन्। तपाइँ धुम्रपान गर्नुहुन्न भने उनीहरुलाई केही नरमाइलो लाग्न सक्छ अन्यथा तपाइँलाई एक खिल्ली चुरोट खिलाउनु र आफ्नै हातले लाइटर बालिदिएर सल्काइदिनु उनीहरुका लागि हार्दिक विषय पनि हो।
17- विविधतायुक्त मौसम – चीनमा मुख्यतया चार ऋतु हुन्छन् तीमध्ये यदि बेइजिङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने जाडो र गर्मीको दुई मौसम भन्दा पनि हुन्छ। यी दुई बाहेक वर्षा ऋतुमा खासै दिक्क नै हुने वर्षा बेइजिङ्गमा हुँदैन भने शरद ऋतुको मौसम मात्रै सबैका लागि उपयुक्त मौसम मान्न सकिन्छ। चिसोमा अधिक चल्ने हावाले धेरैलाई यात्रामा कठिनाइ उत्पन्न गराउँछ भने हिमपातले पनि कहिलेकाहीं बेइजिङ्ग यात्रालाई नमीठो बनाउनसक्छ।
18- चर्को बोल्ने चिनियाँ - चिनियाँहरु चर्को बोल्दछन् भनेर सबैलाई थाहै छ। त्यतिमात्रै नभएर चिनियाँले चर्को बोल्यो भनेर उछित्तो काढ्नेहरुको कमी छैन दुनियाँमा। चिनियाँ भाषा टोनको राइज फलका आधारमा निर्मित छ त्यसमा कुनैमा चर्को त कतै मध्य स्वरमा बोल्नुपर्छ जुन कुरा चिनियाँ भाषाको संरचना नजानेका मानिसलाई अनौठो र झिँजो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। उनीहरुको भाषामा सँस्कृत जस्तो नरमपना वा हिन्दी धार्मिक श्रृँखलामा भगवानका पात्रहरुले बोलेको जस्तो माधुर्य हुन्छ भन्ने सोच्नु सान्दर्भिक हुँदैन। जतिसुकै मायालु भावमा कुरा गरेपनि बोल्दा उस्तै कर्कश त भैहाल्छ नै। त्यसमाथि चिनियाँहरु आपसमा बोल्दा विदेशीलाई त अव चाहिं हात हालाहाल गर्छन् कि जस्तो लागिरहन्छ।
19- विनम्र चिनियाँ - चिनियाँहरु पनि हरेक कुरामा विनम्रता प्रकट गर्दछन्। पश्चिमाको प्रभाव हुनुपर्छ उनीहरु सजिलै कृतज्ञता प्रकट गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यो धन्यवाद शब्दलाई यहाँ पनि सस्तो पारिएको जस्तो लाग्छ। तपाइँले पनि कुनै सहयोग पाउनुभयो वा कसैलाई कुनै कुरामा दुःख दिनुपर्‍यो भने अग्रिम से से भन्दा कार्यसम्पादनमा केही आत्मीयता देखिनसक्छ।
20- आफू जाने ठाउँको खोजी - चीनमा कुनै पनि ठाउँसम्म पुग्नु सजिलो छ। नक्शा एकदमै प्रष्ट र भरपर्दो हुन्छ। त्यतिमात्रै नभएर सार्वजनिक यातायातद्वारा गन्तव्यसम्म पुग्न पनि कुनै समस्या हुँदैन। कतिपय चिनियाँहरु आफू बसेको ठाउँबाहेक दायाँबायाँ के छ भन्ने कुराको पनि वास्ता गर्दैनन् र अलि परसम्म हिँडेर के के छ भन्ने सम्म पनि विचार गर्दैनन्। अनि तपाइँ त्यस्तै मान्छेलाई आफ्नो गन्तव्यबारे सोध्न थाल्नुभयो भने नजीकैको ठाउँ पुग्न पनि घण्टौं लगाउनुहुनेछ। त्यसैले स्पष्ट नतीजाका लागि कुन दिशा नभनेर दुईजना मानिससँग परिक्षण गरेर मात्रै पाइला चाल्नु उत्तम हुनेछ। त्यो भन्दा सर्वोत्कृष्ट उपाय चाहिं हातमा नक्सा लिएर हिँड्नु नै हो।
21- किनमेल - किनमेल गर्दा घुमुवा व्यापारीबाट जोगिनुपर्ने अवस्था चीनमा पनि हुन्छ। सामान्यतया एशियनका अनुहार चिनियाँसँग मिल्ने अर्थात् पश्चिमा वा अफ्रिकनको जस्तो स्पष्ट रंग नछुट्टिने भएकाले खासै महंगीमा नफस्न पनि सकिन्छ। तथापि उनीहरुबाट सस्तोमा सामान् किन्ने लोभमा महंगो वा कमसल मालमा फस्न सक्ने संभावना हुने भएकाले सचेत हुनु पर्दछ। त्यति मात्रै नभएर बार्गेनिङ्गको कलाले यहाँ चीनमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दछ। बाहिर देखाइएको वस्तुमा कुरा मिलाएपछि तपाइँले भित्र प्याक गरेर राखिएको वस्तु धुलोमैलो नलागेको हुनसक्ने विश्वासले नहेरीकन लिनसक्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्नु गल्ती पनि हुनसक्छ। कतिपय व्यापारीले बाहिर राम्रो वस्तु देखाउँछन् भित्र नराम्रो राख्नन् ताकि ग्राहकले भित्रको वस्तु रोज्ने भएकाले शो पिस चाहिं सक्कली र अरु नक्कली पनि पर्नसक्छ।
मैले देखेको छु नेपालका पर्यटकीय स्थलमा घुमन्ते व्यापारीहरुले पर्यटकलाई हैरान हुनेगरी सामान किन्न लगाएको। चीनमा चार वर्षको अनुभवमा मैले कहिल्यै त्यस्तो अनुभव गर्नुपरेको छैन। तपाइँ नजीक कुनै व्यापारी आइपुग्यो भने आँखा पनि नजुधाउनुहोस् वा तपाइँले हुन्छ हुँदैन केही नभनी बाटो लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ।
22- नजिकिने चिनियाँ– भर्खर खुलापनतर्फ अग्रसर चिनियाँहरुका लागि विदेशीसँग मित्रता बनाउनु, उनीहरुसँग फोटो खिचेर आफन्तलाई देखाउँनु रोचक विषय बन्छ। कुनै अपरिचित चिनियाँले पनि चिनेको जस्तै गरेर टाँसिएर फोटो खिच्न खोज्दा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। यसरी नजीकिनुका पछाडि यो मित्रता मात्रै नभएर तपाइँसँग अङ्ग्रेजी भाषामा संवाद गर्ने पनि हुनसक्छ वा नजीकिने मानिस व्यापारी रहेछ भने कुनै चीज बेच्न खोज्नेछ। फोटो खिच्न आउनेले तपाइँको व्यस्ततालाई नबुझ्न पनि सक्छ तथापि उनीहरुको खुशीका लागि तपाइँले एकछिन सेलिब्रिटीको अनुभव साँच्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैको नजिकिने बहाना अङ्ग्रेजी सिक्नु हो भने केही शब्द आदान प्रदान गरिदिन खासै समस्या नहोला।
23- विवादास्पद कुरा नझिक्ने कि? - तपाइँको चीन यात्रालाई रमाइलो बनाउने अनेकन् खुराकहरु भेटिन्छन् तर यस्तैमा पनि कतिपय मानिसहरु बौद्धिकता प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा विवादास्पद विषयमा धारणा बुझ्न खोज्दछन् र आपसी सम्बन्धलाई तिक्ततामा रुपान्तरण गर्दछन्। विशेष गरी पश्चिमा जगतबाट आएका मानिसहरु तिब्बतको विषय, चीनको एक देश दुई व्यवस्थाप्रति टिकाटिप्पणी गर्ने गर्दछन्। यसबाट स्वाभाविक रुपमा मतभेद सिर्जना हुनसक्दछ। नेपालबाट आउने पर्यटकहरुमध्ये विशेष गरी 60 वर्ष अघिको तिब्बती र तिब्बती भौगोलिक अवस्थितिलाई तस्वीरमा हेरेर सारा चिनियाँप्रतिको स्टेरियोटाइप अवधारणा सँगालेका हुन्छन्। आफ्नो एकांगी विचारधारालाई परिवर्तन गर्दै समयानुकूल चीनलाई बुझ्नु र अनुभव गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। चिनियाँहरुलाई नेपालको बारेमा त्यति जानकारी हुँदैन जति नेपालीहरुलाई युरोप अमेरिका बारेमा जानकारी हुन्छ। चिनियाँहरुलाई पश्चिमा मुलुकका बारेमा धेरै जानकारी छ तर नजीकका गुमनाम वा अन्तराष्ट्रिय जगतमा खासै नछाउने मुलुकप्रति कुनै चासो वा ज्ञान नहुन पनि सक्छ। शाक्यमुनि बुद्ध, सगरमाथा आदि विषयमा नेपालको नाम उल्लेख नहुँदा चित्त दुख्न सक्छ। कमजोरी उनीहरुले नजान्नु हो वा हामीले प्रस्तुत गर्न नसक्नु भन्नेमा पनि आउँछ। चिनियाँ विशेषतायुक्त राजनीतिक प्रणालीलाई लिएर अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु पनि श्रेयस्कार हुँदैन।
24- नीजि मामिला (केही समस्या छैन) – नेपालमा एउटा मान्यता छ – महिलाको उमेर नसोध्नू, पुरुषको तलव नसोध्नू। सोध्दा हुने सामाजिक असरका बारेमा सम्बन्धित मानिसहरु नै जानकार होलान् तर चिनियाँहरुलाई यी दुवै कुरा सोध्न र भन्न कुनै संकोच लाग्दैन। विदेशीहरुका नीजि मामिलामाथि खोजीनीतिलाई गर्न मन पराउँछन् जुन पश्चिमाहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने झैं गरी बढाइचढाइँ गरेको सुनिन्छ। के तपाइँ विवाहित हो? तपाइँ कति वर्षको हुनुभयो? तपाइँको मासिक आम्दानी कति छ? शैक्षिक योग्यता? आदि कुराहरु चिनियाँहरु निर्धक्कसँग सोध्छन्।त्यति मात्रै हैन यहाँ तपाइँको प्रेमी-प्रेमिका भए नभएको वा लिभिङ्ग टुगेदरमा रहे-नरहेको, यौनशिक्षा, नीजि जीवनशैलीका अनेकन् कुराहरु सोध्नुभयो भने पनि निःसंकोच उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक विदेशी भएको नाताले भिन्न सँस्कृतिबारे चासो त जोकसैलाई हुने नै भयो।
चीन घुमेका हरेक नेपालीले चीनको विकास, चिनियाँ जीवनशैली, बानी व्यहोरा, सँस्कृति आफूले सुनेको भन्दा भिन्नै भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। अधिकांश नेताहरुले नजीकको छिमेकीको यो अत्यासलाग्दो विकासे रफ्तारबाट नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिन्छ्न्। वास्तवमा धेरै सकारात्मक भएर सबैजसो भ्रमणकर्ता प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ। साठी वर्ष अघिको नेपाल र चीनमा आकाश जमीनको भिन्नता र परिवर्तन छ। यहाँको परिवर्तन र आर्थिक विश्वका लागि एउटा मियो बन्दै गएको छ भने नजीकको छिमेकीको नाताले नेपालले पनि लाभ उठाउन सक्छ।
चीन एकैचोटीमा बुझिने मुलुक हैन, चीन किन घुम्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो भने अनेकन जवाफहरु निस्कनेछन्। तर चीनले कसरी प्रगति गर्‍यो? चीनको विकास मोडल कसरी कामयावी भयो भन्ने कुरा नीति निर्माणको तहमा पुगेकाहरुले बुझेर आफ्नो मुलुकमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेमा अर्थपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैगरी सर्वसाधारणले चिनियाँ जीवनशैली कसरी परिवर्तन भएको छ? किन चिनियाँहरु आफूलाई फरक रुपमा ढाल्दै गैरहेका छन्? के कारणले उनीहरुको सोचको दायरा फैलिँदै गएको छ भन्नेबारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेमा हामी उनीहरुजस्तो तीव्र गतिमा नभएपनि रुपान्तरणका लागि प्रेरित हुनसक्छौं। कुनै पनि मुलुक आफैंमा पूर्ण हुँदैन। सबैमा आआफ्नै विशेषता छन् र व्यक्तिगत हिसाबले सबैका लागि कुनै कुनै प्रतिकूलता पनि छन्। नेपालीहरु संसारको कुना कुना पुगेका छन्। पर्यटकीय संरचना र संस्कृतिका बारेमा जाने, बुझे र महसुस पनि गरेका छन्। ती अनुभवहरु देशको विकासका लागि प्रयोग हुन सकेमा राम्रो हुनेछ।